အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 22, 2020 စက်တင်ဘာလ 22, 2020 စာရေးသူ အင်ဒရူး ဟာ Off comments အနည်းငယ်လောင်းကစားနည်းများအပေါ်
ကာစီနိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်အားကစားကစားခြင်းများကိုကူညီရန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားစွမ်းရည်နှင့်စနစ်များကိုတီထွင်နိုင်သော်လည်းအခြေခံစည်းကမ်းချက်မှာအမြဲတမ်းမပျက်မစီးရှိနေသည်။ ပိုအောင်မြင်သောလောင်းကစားသမားဖြစ်လာရန်ကူညီနိုင်မည့်အခြေခံကျသောအချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည် (သို့) အလေးအနက်ထားရမည့်အရာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အင်တာနက်ကိုအဓိကကျသောနည်းဗျူဟာများစွာဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်
လောင်းကစားတစ်ခုစီတွင်သင်၏ဂိမ်းဘဏ်၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုသုံးပါ။ ၁-၅% ။
လောင်းကစားကိုသုံးပါ အပိုဆုကမ်းလှမ်းမှု ဂရုတစိုက်နှင့် - အကယ်၍ သင်သာလိမ္မာပါးနပ်ပါကသူတို့သည်သင့်အားအန္တရာယ်ကင်းသောဂိမ်းများကိုပေးနိုင်သည်
ဤ ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်များ သင်၏ရေရှည်အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများ၊ တစ်လလျှင်လောင်းကစားအချိန်နှင့်သင်မလိုချင်သောငွေများဆုံးရှုံးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင်မဖြုန်းနိုင်သည့်ငွေများ!
အရေးကြီးသည့်အချက်မှာအရေးကြီးသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားသမားများအတွက်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ခေါင်းမာခြင်းတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလောင်းကစားလုပ်တဲ့သူတောင်မှလတွေဆုံးရှုံးရတယ်။ ဒါပေမယ့်အရာရာပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိသူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားလို့သူတို့ဟာထိပ်ဆုံးကနေထွက်လာတယ်။
သင်၏လောင်းကစား / အမာခံလောင်းကစားရည်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်ရွေးချယ်သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းရွေးချယ်မှုနှင့်သင်ရွေးချယ်သောလောင်းကစားအမျိုးအစားမှာ မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော်လောင်းကစားသမားအများစုသည်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားများစွာသို့အမြဲတမ်းကျရောက်သည်။
Jackpot လောင်းကစားခြင်း - တိုးတက်သော jackpot slot machines, lottos နှင့် parlor games အပါအ ၀ င်၊ jackpot သည်လောင်းကစားသည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပေးချေမှုကိုချက်ချင်းရနိုင်သည်။ သို့သော်၊ jackpot ဂိမ်းများကိုအနိုင်ရခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့် ၁၀၀% အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားသူအများစုနှင့်ကြီးမားသောကစားသမားများကထိုဂိမ်းများကိုကစားကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်တတ်နိုင်သည့်အပန်းဖြေလောင်းကစားခြင်းနယ်ပယ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်လျှင် Vegas စတိုင်စက်များပေါ်တွင်ကစားပါကနောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်!
စားပွဲတင်ဂိမ်းကစားခြင်း - ကစားခြင်း၊ ကစားခြင်း၊ ကစားခြင်းစသည့်ဂန္ထ ၀ င်ဂန္ထဝင်များအားလုံးကိုလောင်းကစားသမားများနှင့်သာမာန်ကစားသမားများနှစ်သက်စေရန်အတွက်ဆွဲဆောင်သည်။ သဘာဝကျကျဤနယ်ပယ်သည်ကာစီနိုလောင်းကစားသမားများကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်အနိုင်ယူလိုသောလောင်းကစားရုံလောင်းများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အလွန်အစစ်အမှန်ဂရပ်ဖစ်၊ အလိုအလျောက်ကစားခြင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အခြေခံစနစ်များကိုကောင်းကောင်းတုန့်ပြန်ခြင်းဖြင့်စားပွဲများသည်အိပ်ရာခင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်မီသောဆုလာဘ်များလိုသောအပန်းဖြေလောင်းကစားသမားများ။
slot ကလောင်းကစား - Las Vegas ၏အရှိန်အဝါသည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းနည်းလမ်းကဲ့သို့ပင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ Slot ဂိမ်းများသည်ကံကောင်းခြင်းကိုအခြေခံသည့်လောင်းကစားခြင်း၊ လတ်ဆတ်သောအကြောင်းအရာများနှင့်စက်များနှင့်အတူ Vegas အစရှိသောဆော့ကစားသည့်ဂိမ်းများနှင့် Tomb-raider Secret of the Sword ကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယို slot များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းကစားသူများသည် console ပုံစံ feature slot များနှင့် slot ပြိုင်ပွဲအသစ်များမှကစားသော multi-player online လောင်းကစားကိုနှစ်သက်ကြသည်။
အားကစားလောင်းကစား - ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဝေးရာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုရိုးရာအားကစားလောင်းကစားခြင်းကလွှမ်းမိုးသည်။ စျေးကွက် ၂၄/၇ နှင့်နေ့စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောအခွင့်အရေးများရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားကဏ္ sector သည်အားကစားလောင်းကစားနယ်ပယ်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းမှ ၀ င်ငွေရှာရန်အတွက်အမြတ်အစွန်းရလိုသောအလယ်အလတ်ကစားသမားများနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှာဖွေနေသည့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လောင်းကစားသမားများ၏စျေးကွက်သို့ဆွဲဆောင်သည်။
မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းနယ်ပယ်သည်သင်၏အပူပိုင်းဇုန်ဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့လောင်းကစား ၀ ယ်ယူရန်မလိုအပ်သောအပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ပွဲစဉ်အပိုဆုများနှင့်အခြားစစ်မှန်သောမက်လုံးများစွာကိုအခမဲ့လောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုလောင်းကစားရုံများ၊ လောင်းကစားများ၊ ဆော့ကစားစက်များ၊ နန်းခန်းဂိမ်းများ၊ အဆင့်မြင့်ဂျက်ဖော့များနှင့်အားကစားလောင်းကစားခြင်းများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားသောနယ်ပယ်များနှင့်ခွဲထွက်ခြင်းများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုလောင်းကစားလိုလားသူလောင်းကစားသမားများနှင့်အပန်းဖြေသန့်ရှင်းသောကစားသမားများအကြားအနိုင်ရလိုသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ၊ စည်းကမ်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ (ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကံကောင်းပါစေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ) ကြားတွင်တွေ့ရသည်။
သို့သော်ကစားသမားနှစ်မျိုး၏ကွဲပြားမှုသည်သန့်ရှင်းသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအဆင့်မြင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားသမားများကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ကစားသမားများကဲ့သို့ကစားသမားများစွာနှင့်အတူ၊ သို့သော်အပန်းဖြေရန်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းသည်ပျော်စရာ၊ အပန်းဖြေရန်သို့မဟုတ်လေးနက်သောကစားရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆန္ဒကိုပုံသွင်းနိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားငွေများသည်အလေးသာမှု၊ လောင်းကြေးအဆင့်၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကြီးမားစွာကွဲပြားသည်။ Vegas ၏မျိုးဆက်သစ်တိုးတက်မှုရှိသော jackpot slot games ကြောင့် ၀ က်ဘ်၏အကန့်အသတ်ရှိသည့်ဂိမ်းကစားသူများသည်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၌လောင်းကစားအတွက်ပျမ်းမျှလောင်းကြေးသည် ၉၅-၉၈.၅% ဖြစ်ပြီးလောင်းကစားရုံများနှင့်တရားမျှတပြီးရေရှည်ခံသည့်စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်အားကစားလောင်းကစားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည် - အဖြစ်အပျက်၏ထူးခြားသောအမှုများနှင့်အခြေခံမတည်ငြိမ်မှုများပေါ် အခြေခံ၍ ပေးဆပ်ခြင်း။
အားကစားနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးသည်ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအတွက်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အခမဲ့အပိုဆုကြေးများကိုမကြာခဏပေးလေ့ရှိသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုအမြောက်အများသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပြီးငွေသွင်းရန်မလိုပါ။ သို့သော်အားကစားအားလုံးသည်သင့်အားအခမဲ့အလောင်းအစားများမပေးမီငွေပေးငွေယူမှုများလိုအပ်သည်။ မဆင်မခြင်လောင်းကစားလုပ်ရန်သွေးဆောင်ခြင်းထက်စည်းကမ်းနှင့်အပိုဆုကြေးကို သုံး၍ သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်စေပါ။
MagicalVegas ကာစီနိုမှာ 35 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
ဘုရင်က Neptune ကာစီနိုမှာ 85 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
135 Hippozino ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
55 အခမဲ့ Elite မိုဘိုင်းကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
Yako ကာစီနိုမှာ 95 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
170 Buck & Butler ကာစီနိုတွင်ငွေသွင်းရန်အပိုဆုကြေးမရှိပါ
အကြွေစေ့ရေတံခွန်ကာစီနိုမှာ 130 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
120 GameVillage ဘင်ဂိုကစားကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Black က Lotus ကာစီနိုမှာ 140 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
90 အခမဲ့ Prospect ခန်းမကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
80 အခမဲ့ SunnyPlayer ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
70 အခမဲ့ SuperGaminator ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
အနီရောင် flush ကာစီနိုမှာ 25 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
25 အခမဲ့ Suomiarvat ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
Florijn ကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
60 slot ကို Magic ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
150 အခမဲ့ Planet ကိုကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
125 အခမဲ့ Play ကို Vivid ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
Virtual စီးတီးကာစီနိုမှာ 60 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
40 huone ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
အဆိုပါ Virtual ကာစီနိုမှာ 155 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ